खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५११.८८ रुपैयाँले बढ्दै ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५११.८८ रुपैयाँले बढ्दै !
त्यस्तै चाडबाड नजिकिँदै गर्दा तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । हरेक वर्ष झैँ यसपाली पनि चाडबाडको मुखमा तरकारीको भाउ उकालो लागेको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक महिनायता तरकारीको मूल्य बढिरहेको छ । भदौ १३ गते प्रतिकिलो २० रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको तीते करेलाको मूल्य अहिले ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले किनबेच भएको लौकाको मूल्य अहिले ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले पछिल्लो एक महिनायता तरकारीको मूल्य बढ्न थालेको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय तीते करेला, लौका, घिरौंला र साग लगायतको मूल्य पनि बढेको छ । तर, यो अवधिमा केही तरकारीको मूल्य भने घटेको छ ।’
कालिमाटीको थोक बजारमा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ रहेको तोरीको सागको मूल्य अहिले बढेर ७५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तै, उक्त मितिमा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ मूल्य रहेको रायोको सागको मूल्य अहिले १५५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।